Africa Oo Ku Guul-daraysatay Bixinta Lacago Lagu Maalgalinayay Amniga Qaarada. -
Africa Oo Ku Guul-daraysatay Bixinta Lacago Lagu Maalgalinayay Amniga Qaarada.
Madaxda Midowga Afrika ayaa isku raacay in dib loo dhigo isticmaalka lacagaha ku jira sanduuq loogu talo galay in laga maalgaliyo hawlgalada dhinaca amniga ah ee qaarada tan iyo sanadka 2023, waxana dib u dhigidan lagu sababeeyay in la helay qaadhaano lacag ah oo ka yar intii la filayay.
Gunaandkii shirkii ka dhacay caasimada Itoobiya ee Addis Ababa, Madaxda Midawga Africa waxay go’aansatay inaysan bilaabin isticmaalka lacagta santuuqan cusub kadib markii ay soo baxday in ka yar kalabar $ 400 milyan ee la rabay in la ururiyo la helay.
Wadamada Umaddu waxay ilaa hadda soo aruuriyeen $ 164 milyan oo keliya, ayuu yiri Donald Kaberuka, oo ah ergeyga gaarka ah ee AU-da u qaabilsan sanduuqan.
In ka yar 30 dowladood ayaa si buuxda u bixiyay tabarucaaddooda, halka shan dalna aanay wali bixin qaybtii kaga aadanayd tabarucaadkan.
Dowladaha Waqooyiga Afrika, oo ay ka mid yihiin Masar iyo Aljeeriya, ayaa ku dood ka keenay bixinta tabarucaaddooda sannadlaha ah waxayna doonayaan in dalalka Bartamaha Afrika sida Cameroon iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ay bixiyaan lacag intaa ka badan.
Midowga Afrika, oo ka kooban 55 dal oo Afrikaan ah, ayaa rajeynayey in ay qoondo lacag ah oo qaadhaan ah dhigaan sanduuq cusub, lacagtaas oo la qorsheegay in sanadkan laga bilaabo lagu maalgaliyo hawlgallada nabad ilaalinta, dhexdhexaadinta iyo ka hortagga khilaafaadka qaaradda oo wajaheysa qatar weyn oo kaga imaanayso laba jiho oo ay mid tahay rabshadaha ka aloosan gudaha dalalka qaarada iyo tan labaad oo ah argagaxiso.
Kaberuka wuxuu sheegay in go’aanka ku saabsan qoondada tabarucaadka ah ee dal walba bixin karo qorshayntooda dib loo dhigay illaa dhamaadka sanadkaan.
Si kastaba ha ahaatee guuldaradan Africa ka qabsatay inay sanduuq tabarucaad ah ooo ay u samayteen hawlgalada Amniga sidii loo qorsheeyay ugu yaboohaan, ayaa dhabar jab ku ah ka hortaga weerarada amni darada ah eek u sii xoogaysaya gallbeedka Africa, iyo sidoo kale hawlgaladii Amisom ee Somalia oo deeqbixiyayaasha caalamiga ahaa ay go’aansadeen inay dhimaan lacagahii ay ku bixin jireen.
Faah-faahinta Dilkii Maanta Lagu Fuliyay Ragii Dilay Caasho Ilyaas.
Wadahadalo Lagu Soo Afjarayay Xiisad ka Dhalatay Cunaqabatayntii Qatar Oo Burburay.